China iphrinta ephrintiwe yangokwezifiso zepulasitiki yefilimu yokupakisha okuzenzakalelayo nefektri abakhiqizi | Hong Bang
I-HONGBANG isabalalise imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ephrintiwe yesitoko esezingeni eliphakeme kumakhasimende kulo lonke elaseYurophu naseMelika iminyaka engaphezu kwengu-20. Inikezela ngezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zebhithi lepulasitiki laminated ifilimu. Iningi lemikhiqizo yamafilimu isetshenziselwa ukufakwa kokufakwa kokudla kuthi okunye kuye kuzinhlelo ezikhethekile.
Siphakela izixazululo zebanga lasendle lokusebenzisa ifilimu. Inani lokucushwa okungenzeka kwefilimu yethu enezendlalelo eziningi alinamkhawulo. Noma ngabe udinga ukupakisha umkhiqizo wakho wokudla okufriziwe, noma ukudla oku-pre-packed hotable, singakunika isixazululo esifanele. Siyakwazi ukuhlangabezana nezidingo eziyinkimbinkimbi kakhulu zezindawo zokuvikela ukushisa, ukukhanya, i-Oxygen nomoya, umswakama kanye ne-powder.
Isithiyo sethu samafilimu afaka i-CPP, i-PET, i-EVOH, i-PP enensimbi, ucwecwe, i-TOPP, i-VMPET. Ngezidingo ezikhethekile, njengokufakwa okuzenzakalelayo, sinikezela ngamafilimu amakhulu wokufaka uphawu nawokushisa. Ifilimu yethu engu-7 yenyiloni / PE ibingumholi wentengo eYurophu naseMelika noma kumabhayisikobho wesithiyo avunyelwe yi-FDA.
Coex futhi laminated barrier roll
Isisindo esiphansi se-poly roll
Iroli ebolayo ngokubola
Ifilimu i-Roll idizayini ethile yomugqa wefektri. Singazenzela isisekelo sefilimu ngesidingo sakho, kungaba ucwecwe lwe-aluminium, ifilimu ye-BOPA / NYLON, ifilimu ye-ALOX, ifilimu ye-SIOX, i-Polyester, i-BOPP njll. .
Siphakela izixazululo zebanga lasendle lesicelo sefilimu esivimbelayo.Sitshele imfuneko yakho sizohlangabezana nazo zonke izinhlobo zezidingo zakho. Asenzi imikhiqizo futhi sizama ukukuyisa kuyo; silalela izidingo zakho nobunjiniyela obusha obuzoxazulula izinselelo zakho zokupakisha.
Langaphambilini I-Roll Ephrintiwe Ngokwezifiso Ephakanyisiwe
Olandelayo: Ukupakisha imaski ebusweni kwezikhwama zepulasitiki